ရင်ဖိုဖွယ်ရာ အတွင်းသားအလှတွေ အထင်းသားပေါ်လွင်နေတဲ့ ပုရိသတို့ အသည်းစွဲ သဇင်ဦးရဲ့ TIK TOK ဗီဒီယို – Online News Post
ချစ် ပရိသတ် ကြီးရေ…. ပုရိသတွေ ရဲ့ အသည်းစွဲ လေး တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ မော်ဒယ် သဇင်ဦး က တော့ ဆိုရှယ် မီဒီယာ ပေါ်တွင် အောင်မြင် နေတာ ကို သိကြမယ် ထင်ပါ တယ် နော်..။သူမ ရဲ့ အလှဟာ စွဲမက် စရာကောင်း တဲ့ ပင်ကိုယ် အလှ တရားတွေ ရှိ တာ ကြောင့် ယောကျာ်းလေး ပရိသတ် တွေ ရဲ့ အများဆုံး အားပေး ချစ်ခင် ခြင်း ကို ခံနေရ တဲ့ သူလေး ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။ဆွဲဆောင် မှု ရှိတဲ့ အမိုက်စား ဘော်ဒီ လေး ကို ပိုင်ဆိုင် ထားကာ သူမ ရဲ့ အလှ ပုံရိပ် တွေကလည်း မြင်သူတိုင်း ငေးရ တဲ့ မော်ဒယ်လေး တစ်ဦး လည်း ဖြစ်ပါ တယ်..။
သူမ ကတော့ မြန်မာ ဆန်ဆန် ဖက်ရှင် ပဲ ဝတ်ဝတ် ခပ်မိုက်မိုက် လေး ပဲ ဝတ်ဝတ် ဆွဲဆောင်မှု က တော့ အပြည့်ရှိကာ ကြွေချင် စရာ ကောင်းလောက် တဲ့ ပုံရိပ်တွေ ကို လူမူကွန်ယက် စာမျက် နှာ ပေါ်တွင် တင်ပေးလေ့ ရှိကာ ပရိသတ် တွေ ကလည်း စောင့်ကြည့် အားပေး နေကြ တာလည်း တွေ့ရ ပါ တယ်..။သဇင်ဦး ဟာ မိန်းကလေး တိုင်း အားကျ ရတဲ့ အသား အရည်လေး နဲ့ အပြစ် ပြောစရာ မရှိအောင် ဖြူဖွေးဝင်းပ နေ တာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။အားလပ်ချိန် လေးတွေ မှာတော့ ချစ် ပရိသတ် တွေ အတွက် အမိုက်စား Tik Tok လေး တွေ ဆော့ကစားပြီး တင် ပေး လေ့ရှိ သူ ပါ..။
ယနေ့ မှာ ဆိုရင် လည်း ပရိသတ် တွေ အလွမ်းပြေ အောင် အသည်းယားစရာ ကောင်း တဲ့ ပုံစံလေး နဲ့ သရုပ်ဆောင်ထား တဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုလေး ကို မျှဝေပေး လာ တာ ဖြစ် ပါ တယ်..။ခေတ်စား နေတဲ့ သီချင်းလေး ကို ချစ်စရာ ကောင်းအောင် ဆော့ကစား ထား တာ ကြောင့် မကြည့်ရသေး တဲ့ ပရိသတ် တွေ အတွက် သဇင်ဦး ရဲ့ ဗီဒီယို လေး ကို ပြန်လည် တင်ဆက် ပေး လိုက် ပါ တယ်..။ကဲ…ပရိသတ် တွေ ကလည်း သဇင်ဦး ကို ထပ်ပြီး ကြည့်ရှု အားပေး လိုက်ကြပါ ဦးနော်…။
ခ်စ္ ပရိသတ္ ႀကီးေရ…. ပုရိသေတြ ရဲ့ အသည္းစြဲ ေလး တစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲ့ ေမာ္ဒယ္ သဇင္ဦး က ေတာ့ ဆိုရွယ္ မီဒီယာ ေပၚတြင္ ေအာင္ျမင္ ေနတာ ကို သိၾကမယ္ ထင္ပါ တယ္ ေနာ္..။သူမ ရဲ့ အလွဟာ စြဲမက္ စရာေကာင္း တဲ့ ပင္ကိုယ္ အလွ တရားေတြ ရွိ တာ ေၾကာင့္ ေယာက်ာ္းေလး ပရိသတ္ ေတြ ရဲ့ အမ်ားဆုံး အားေပး ခ်စ္ခင္ ျခင္း ကို ခံေနရ တဲ့ သူေလး ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္..။ဆြဲေဆာင္ မႈ ရွိတဲ့ အမိုက္စား ေဘာ္ဒီ ေလး ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားကာ သူမ ရဲ့ အလွ ပုံရိပ္ ေတြကလည္း ျမင္သူတိုင္း ေငးရ တဲ့ ေမာ္ဒယ္ေလး တစ္ဦး လည္း ျဖစ္ပါ တယ္..။
သူမ ကေတာ့ ျမန္မာ ဆန္ဆန္ ဖက္ရွင္ ပဲ ဝတ္ဝတ္ ခပ္မိုက္မိုက္ ေလး ပဲ ဝတ္ဝတ္ ဆြဲေဆာင္မႈ က ေတာ့ အျပည့္ရွိကာ ေႂကြခ်င္ စရာ ေကာင္းေလာက္ တဲ့ ပုံရိပ္ေတြ ကို လူမူကြန္ယက္ စာမ်က္ ႏွာ ေပၚတြင္ တင္ေပးေလ့ ရွိကာ ပရိသတ္ ေတြ ကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ အားေပး ေနၾက တာလည္း ေတြ႕ရ ပါ တယ္..။သဇင္ဦး ဟာ မိန္းကေလး တိုင္း အားက် ရတဲ့ အသား အရည္ေလး နဲ႔ အျပစ္ ေျပာစရာ မရွိေအာင္ ျဖဴေဖြးဝင္းပ ေန တာ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္..။အားလပ္ခ်ိန္ ေလးေတြ မွာေတာ့ ခ်စ္ ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ အမိုက္စား Tik Tok ေလး ေတြ ေဆာ့ကစားၿပီး တင္ ေပး ေလ့ရွိ သူ ပါ..။
ယေန႔ မွာ ဆိုရင္ လည္း ပရိသတ္ ေတြ အလြမ္းေၿပ ေအာင္ အသည္းယားစရာ ေကာင္း တဲ့ ပုံစံေလး နဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ထား တဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုေလး ကို မၽွေဝေပး လာ တာ ျဖစ္ ပါ တယ္..။ေခတ္စား ေနတဲ့ သီခ်င္းေလး ကို ခ်စ္စရာ ေကာင္းေအာင္ ေဆာ့ကစား ထား တာ ေၾကာင့္ မၾကည့္ရေသး တဲ့ ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ သဇင္ဦး ရဲ့ ဗီဒီယို ေလး ကို ျပန္လည္ တင္ဆက္ ေပး လိုက္ ပါ တယ္..။ကဲ…ပရိသတ္ ေတြ ကလည္း သဇင္ဦး ကို ထပ္ၿပီး ၾကည့္ရႈ အားေပး လိုက္ၾကပါ ဦးေနာ္…။
Previous post ကိတ်လွန်းတဲ့ သူမရဲ့ ရင်မွှာအစုံကို အထင်းသားပေါ်လွင်အောင် လှုပ်ခါဆော့ကစားပြလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်လ် XMUE XMUE ရဲ့ ဗီဒီယို